သင်၏ Android မှစပိန်သတင်းစာများကိုအခမဲ့မည်သို့ဖတ်ရမည်နည်း Androidsis
သင်၏ Android မှစပိန်သတင်းစာများကိုမည်သို့အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်မည်နည်း
အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လိုသူနှင့်သင်သည်ပုံနှိပ်ခြင်း၏ပုံမှန်စားသုံးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြမည့်အနေဖြင့်ဤဆောင်းပါးကိုသင်နှစ်သက်မည်မှာသေချာသည်။ သင်၏ Android terminal မှစပိန်သတင်းစာများကိုအခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ပုံတက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းနှင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်လုံးဝအခမဲ့နှင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်သိ, သင် click ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်ဘာလဲ «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ရှုပါ» သတိပြုမိရန်နှင့်အသိပေးရန်အကောင်းဆုံးနည်းကိုသိရန် စပိန်နိုင်ငံရှိသတင်းစာများကိုအခမဲ့ဖတ်ရှုခြင်း.
1 သင်၏ Android မှစပိန်သတင်းစာများကိုမည်သို့အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်မည်နည်း
2 သို့သော်ထိုလျှောက်လွှာတွင်မည်သည့်စပိန်သတင်းစာများပါ ၀ င်သနည်း။
3 စပိန်သတင်းစာများကိုဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ စပိန်သတင်းစာများကိုအခမဲ့ဖတ်ရှုရန်အပလီကေးရှင်း
4 Google Play Store မှစပိန်သတင်းစာများကိုအခမဲ့ရယူပါ
အကယ်၍ သင်သည်သတင်းစာကိုပုံမှန်စားသုံးသူဖြစ်လျှင်သတင်းပေးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကျွန်ုပ်တို့အားပေးသော Google Play စတိုး၌အခမဲ့ရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိကစပိန်သတင်းစာများကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်i ဟာ iOS application ကိုသတိရစေမယ့်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးကြော့ရှင်းပြီးရိုးရှင်းတဲ့ application တစ်ခုမှာစုစည်းထားပါတယ် iBooks.
ကျွန်ုပ်သည် Play Store ၌အခမဲ့ရရှိနိုင်ကြောင်းပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအနည်းငယ်မျှသာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားသော application သည်လျှောက်လွှာ၏အမည်နှင့်ကိုက်ညီသည် စပိန်သတင်းစာများလျှောက်လွှာတစ်ခုတည်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုမှာပါ။ စပိန်သတင်းစာများကိုအခမဲ့ဖတ်ပါ.
သို့သော်ထိုလျှောက်လွှာတွင်မည်သည့်စပိန်သတင်းစာများပါ ၀ င်သနည်း။
စပိန်သတင်းစာများတွင်သတင်းစာအမြောက်အမြားပါ ၀ င်သည် အဓိကစပိန်သတင်းစာများမှာသေချာသည် စာအုပ်မျက်နှာပြင်အနေဖြင့်သင်၏အဓိကမျက်နှာပြင်မှရရှိနိုင်သောအမျိုးအစားများဖြင့်အဆင်ပြေစွာစီစဉ်ထားသည်။
ယေဘုယျအယ်လ်ပီးစ်၊ ABC ရုပ်သံ၊ အယ်လ်မန်ဒို၊ လာရာဇွန် ၂၀ မိနစ်၊ Tele Prensa ဒစ်ဂျစ်တယ်လွတ်လပ်ခွင့်။
ဒေသဆိုင်ရာ: La vanguardia, El Periódico, El Correo, Las Provincias, La Mañana, Diario de Girona, ABC Sevilla, Diario de Sevilla, Diario de Burgos နှင့်အခြားသောဒေသဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာသတင်းစာများ။
စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ El Economista၊ Cinco Díasနှင့် Inversor Global ။
အားကစား: Ace၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ အားကစားလောက၊ အားကစား၊ အားကစားကွင်း၊
ကြွားသည်: Es el Brasero၊ Es Mas၊ El Huffington Post၊ ပေါ့ပ် ROSA ။
ပုံ: Vogue၊ စပိန်မှဖက်ရှင်၊ ELLE, Fashion United ။
Google Play Store မှစပိန်သတင်းစာများကိုအခမဲ့ရယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏ Android မှစပိန်သတင်းစာများကိုမည်သို့အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်မည်နည်း